बालुवाटरको विवादित जग्गा नेकपाले कब्जा गरेपछि कड्किए गोकुल बास्कोटा, विप्लवलाई के भने ? — Sanchar Kendra
बालुवाटरको विवादित जग्गा नेकपाले कब्जा गरेपछि कड्किए गोकुल बास्कोटा, विप्लवलाई के भने ?
काठमाडौँ । विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले बालुवाटारस्थित बिबादित ललितानिवासको जग्गा कब्जा गरेपछि सरकारका प्रवक्ता एव संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटा जंगीएका छन् । मन्त्री बास्कोटाले बालुवाटारको विवादित जग्गामा झण्डा गाडेर के को बहादुरी ? भन्दै कड्किएका छन । उनले सरकारले वालुवाटारको जग्गा कब्जा गर्ने बिद्रोही नेकपाको घोषणालाई चर्चामा आउने दाउमात्र भएको तर्क गरेका छन् ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गामा नेकपाले झण्डा गाडेको बारेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सार्वजनिक चासो भएको विषयमा कुनै एक्सन गरेर चर्चामा आउने दाउमात्र भएको बताए । ‘सार्वजनिक चासोको विषयमा कुनै त्यस्तो एक्सन गर्‍यो भने शक्तिशाली देखिन्छ कि भन्ने होला’ मन्त्रिपरिषदको निर्णय सुनाउन बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो हास्यास्पद प्रतिक्रिया जनाएका हुन्
विप्लवले कब्जा गर्नुको कुनै अर्थ नहुने मन्त्री बास्कोटाले बताए । ‘झण्डा गाडेर केही हुनेवाला छैन । सरकारले जोगाउन लागेको भए पो बहादुरी गर्नु, सरकार आफैले छानबिन गर्न लागेको छ । त्यसको के खर्थ हुन्छ ?’ उनले भने । मन्त्री बास्कोटाले बालुवाटारको जग्गा नेपाली जनताको भएको दाबी गरे ।
अर्को प्रसंगमा उनले राष्ट्रियताको पक्षमा बोल्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निवासबाट ज्या’न मा’र्ने ध’म्की आएको भन्दै नेकपा सांसद तथा पूर्वगृहमन्त्री भीम रावलले लगाएको आरोपको खण्डन गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो गर्नै नसक्ने बताएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक कार्यक्रममा बाँस्कोटाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नै कार्यकयर्ताका लागि त’रवा’र र खल्तीमा गो’लीको माला बोकेर हिँड्नुहुन्न ।’ सरकारले रावललाई पूर्ण सुरक्षा दिइरहेको बाँस्कोटाको भनाइ थियो। ‘उहाँको सुरक्षामा पछुवा पनि (पूर्वगृहमन्त्रीको हैसियतले प्राप्त सुरक्षाकर्मी) छन् र उहाँको साथमा अन्य सुरक्षाकर्मी पनि छन्,’ बाँस्कोटाले भने।
रावलले केही दिन पहिले एमसीसीविरुद्ध बोल्दा बालुवाटारबाट ज्यान मा’र्ने ध’म्की आएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। बाँस्कोटाले संचारकर्मीको प्रश्नमा प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘भीम रावललाई ध’म्की दिएको भनेको पत्यार लाग्छ ? प्रधानमन्त्री त्यस्तो खालको हुनुहन्छ? कसैको ज्यानै लिने हो?’
प्रधानमन्त्रीले भाषण गर्ने, टिप्पणी गर्ने गरेको तर कसैलाई ज्या’नै मा’र्ने ध’म्की नदिएको बाँस्कोटाको भनाइ थियो। नेताहरूले टिप्पणी गर्नु, आलोचना गर्नु सही भए पनि ज्यान मा’र्ने ध’म्की दियो भन्नेमा सत्यता नभएको उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री निवसाबाट त्यस्तो ध’म्की आएको भए खुलस्त पार्न पनि बाँस्कोटाले रावललाई चुनौती दिएका छन्। उनले भने, ‘साँच्चै त्यस्तो हो भने उहाँले भन्नुपर्छ। यो नम्बरबाट फोन आयो र कसले ध’म्की दियो भनेर बोल्नुपर्छ।’
बालुवाटरको विवादित जग्गा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बुधबार कब्जा गरेको घोषणा गरेको थियो । प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको ललिता निवासी रहेको विवादित जग्गामा झण्डा गाँडेर कब्जा गरेको घोषणा गरेको हो ।
उक्त जग्गा कब्जा गरेपछि नेकपाले हारी गरेको प्रेस नोट यस्तो थियो: –